माधव नेपालमाथि अर्को बज्रपात, नाम चलेका सांसदले एकसाथ छाडे साथ ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
माधव नेपालमाथि अर्को बज्रपात, नाम चलेका सांसदले एकसाथ छाडे साथ !
माधव कुमार नेपाललाई अर्को झड्का लागेको छ । प्रदेश २ का नाम चलेका दुई सांसदले माधवकुमार नेपालको साथ छाडेका छन् । सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङले एमालेमै बस्ने निर्णय लिएका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका एमाले सांसदहरु बिहीबार सनाखतका लागि जनकपुरधामस्थित निर्वाचन आयोगको प्रादेशिक कार्यालयमा जाने तय भएको थियो ।
महतोसहित गोविन्दबहादुर न्यौपाने, प्रमोद यादव, अशोककुमार यादव, मञ्जुकुमारी यादव, बेची लुंगेली, रविन्द्र बैठा, नागेन्द्र राय यादव, हसिमा खातुन र मनोज सेन श्रीवास्तवले भने बिहीबार एकीकृत समाजवादी रोजेर सनाखत गरेका छन् ।